Prepping Foto gị maka Web: Atụmatụ na usoro | Martech Zone
Prepping Foto Gị Maka Web: Atụmatụ na usoro
Wenezdee, Jenụwarị 20, 2010 Thursday, May 14, 2015 Bill Bekee
Ọ bụrụ na ị dee maka blog, jikwaa weebụsaịtị, ma ọ bụ tinye na ngwa mmekọrịta mmekọrịta dị ka Facebook ma ọ bụ Twitter, foto nwere ike bụrụ akụkụ dị mkpa nke iyi ọdịnaya gị. Ihe nwere ike ịbụ na ịmaghị bụ na ọ nweghị ụdị edemede ma ọ bụ njiri ọhụụ ga-eme ka ị nweta foto dị mma. N'aka nke ọzọ, foto dị nkọ ma doo anya ga-eme ka ndị ọrụ dịkwuo mma? nghọta nke ọdịnaya gị ma melite ogo na mmetụta nke saịtị ma ọ bụ blog gị.
At Nkuzi anyị na-etinye ezigbo oge iji kwadebe foto ndị ọzọ maka webụ, yabụ lee ụfọdụ akara aka ngwa ngwa anyị tụtụrụ n'ụzọ.
Biko rụba ama: ntuziaka teknụzụ dị n'okpuru na-ezo aka Adobe Photoshop CS4. Enwere mmemme ndị ọzọ nwere ike ịrụ otu ọrụ ahụ, yabụ ọ bụrụ na ịnweghị ohere ịnweta Photoshop biko lelee akwụkwọ enyemaka maka mmemme mmezi onyonyo gị iji hụ ma ị ga - arụ usoro ndị a.
Ibughari na Ncha
Ọtụtụ mgbe ịkwadebe foto maka weebụsaịtị ma ọ bụ blọọgụ gị chọrọ ka ị mee ka ọ dị obere, ọkachasị ma ọ bụrụ na ọ na-abịa site na igwefoto dijitalụ ọtụtụ megapixel. Ọ dị mkpa ịmata na nbelata nha na-egosi mbelata zuru ezu, dị ka Photoshop bụ? ọnụ pikselụ ndị agbata obi ka ha wee nwee ike dabara n'ihe oyiyi ahụ na nha ọhụụ ya; nke a na-enye foto a blurry anya.
Iji? Adịgboroja? Nzuzo i furu efu ikwesiri itinye nzacha Unsharp Mask (Filter> Unsharp Mask). Echefula aha na-emetụbeghị - nkpuchi Unsharp na-amị amị!
Nwere ike ịchọta otu esi akọwapụta nkọwa ndị dị na ya Nyocha 2 n'okpuru.
Njikwa dị na igbe mkparịta ụka mkpuchi Unsharp nwere ike iyi ihe egwu, mana ozi ọma na ịkwadebe foto maka ntanetị bụ na ị gaghị enwe nsogbu na ha. Achọtara m ọnụọgụ nke 50%, Radius nke .5, na ụzọ mbata nke 0 na-arụ ọrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge niile.
Akuku Images N'ọnọdụ
Na ụfọdụ ndapụta, ị nwere ike ịmepụta usoro thumbnails nke jikọtara na mbipụta buru ibu nke onyonyo. Ihe ngosi a na-ahụkarị maka nke a bụ veranda foto ma ọ bụ isiokwu akụkọ nwere thumbnail nke foto buru ibu.
Mgbe ị na-ebelata onyonyo na ntanetị aka, gbalịa iwepụta onyonyo ahụ na ihe ndị dị mkpa tupu ị gbanwee. Nke a na-enye ndị ọrụ ohere ịghọta ọdịnaya na ihe oyiyi ahụ pụtara na obere nha.
Nyocha 1 bụ onyonyo nke emere ka ọ bụrụ akụkụ nke thumbnail ya ozugbo, mana Nyocha 2 etinyela ihe kacha mkpa maka foto a. Nke a na-enye ndị ọrụ ohere ịghọta ngwa ngwa ihe oyiyi ahụ na-anwa ịkọrọ ma gbaa ha ume ka ị pịa maka ozi ndị ọzọ.
Omume ọma na afọ ojuju
Ihe oyiyi zuru ezu bụ agba ya. Na onyonyo ndị a na-ejupụta, ụcha akpụkpọ ahụ na-arịa ọrịa na mbara igwe dị ka isi awọ na dull. Addgbakwunye ụfọdụ ndụ na onyonyo gị, Photoshop CS4 nwere nzacha m nwere ike ikwu na a kpọrọ Vibrance.
Y’oburu n’ichita iwete ndu gi na foto dull gi nke n’iile:
Tinye akwa mkpuchi ọhụụ (Layer> Mgbanwe Nhazi Ọhụrụ> Omume)
Bawanye ihe mmịfe ahụ (Nyocha 2) n'ime Ogwe ndozi ga-eme ka agba dịkwuo ike ma na-echekwa akpụkpọ anụ (igbochi ha ka ha ghara ịchọrọ oroma). Ntughari saturation ga-enwe mmetụta yiri ya, mana ọ ga-agbanwe ihe oyiyi ahụ dum, gụnyere agba akpụkpọ.
Ndụmọdụ ndị a bụ naanị ọnụ mmiri iceberg n'ihe gbasara atụmatụ bara ụba ma dị ike Photoshop na-enye maka imezi na ịnwepụta foto. Biko nye ihe edeturu na ihe ndị a ma ọ bụrụ na e nwere usoro ọ bụla ọzọ ị ga - achọ ịhụ.
Tags: Adobe Photoshop cs4akukuihe ọkụkụ oyiyinyoImageoyiyi akukuogo njikarịchafotofotoPhotoshopfotochi cs4nkpuchi nkpuchishasha nkpuchi myọchaịma jijijioyi akwa vibrance
Ụgwọ (@IGIHE) bụ imewe isi na Nkuzi ma na-eme ihe osise na kọmpụta kemgbe ụbọchị Amiga 500. Ntaneti na ihe nchọgharị weebụ nyere ya ohere ka ọ jikọta ọdịmma ndụ niile na eserese eserese na usoro nke usoro yana mmasị ya na teknụzụ na mmemme. Ihe omume ntụrụndụ Bill gụnyere Marvel comics, Guitar Hero, na ikiri pọdkastị banyere fim. Otutu n'ime usoro ihe eji eme ya bu ihe otutu nri Dike Coke. Ọ bi ugbu a na Westfield, IN, ya na nwunye ya dị ịtụnanya, Nicole, na nwa nwoke dịkwa ịtụnanya, Van.
VideoHere: Gbakwunyea vidiyo n'ime ngwa ọ bụla
Ezigbo Ndị Ahịa Tech: Kwụsị Atụmatụ Ahịa na Uru